«Raharaha nahafaty ny Dr Daniel» – Toamasina: nentin’ny zandary aty Antananarivo ny profesora Stephan | NewsMada
Mitohy tsy re tsaika ny « Raharaha nahafaty ny Dr Daniel ». Nalain’ny zandary tao an-tokantranony, omaly ny Pr Stéphan. Nentina niakatra aty Antananarivo avy hatrany, niaraka amin’ny vady aman-janany.
Nalain’ny zandary omaly, alahady maraina, tokony ho tamin’ny 9 ora sy 30 minitra ny Pr Stephan sady dokotera ao amin’ny CHU Morafeno, Toamasina. Tsy niandry ela fa niara-niainga amin’ny mpitandro filaminana hihazo an’Antananarivo avy hatrany izy ireo. Voalazan’ny loharanom-baovao fa norarana tsy afaka mampiasa telefaonina ity profesora ity. Na izany aza, miaraka amin’ny vady aman-janany izy ao anatin’ny fiarany ary arahin’ny fiaran’ny zandary avy ao aoriana. Hatreto, tsy mbola fantatra ny anton’izany.
Na izany aza, tsy hitan’ny fampanoavana any Toamasina ny tokony nampanantsoina ity mpitsabo ity teny amin’ny fitsarana, ny herinandro teo. « Tsy misy heloka tokony hanenjehana azy ao anatin’ireo antontan-taratasin’ady rehetra hatreto », hoy izy.
Misy pitsompitson-dalàna arahina
Nanteriny aza fa misy pitsopitso-dalàna tokony harahina amin’ny fampiantsoana olona tahaka izany. Tsy mbola najaina izany nefa zon’ny torina amin’ny maha profesora sy amin’ny maha Sojabe ny sampam-pianarana fitsaboana azy eny amin’ny oniversite Barikadimy, araka ny nambaran’ny tonia mpampanoa lalàna hatrany.
Etsy an-daniny, nohitsiny fa ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika izao ka tsy hitan’ny fitsarana ny tombony amin’ny fanenjehana mpisabo, tsy hita fahamarinany amin’ny vono olona ao anatiny. « Mety hiteraka fahakiviana sy fikorontanan-tsaina ho an’ireo mpitsabo misahana ny valanaretina covid-19 izany… Iza no hahazo tombony raha hitranga izany rehetra izany nefa ady no hatrehintsika amin’izao » hoy hatrany ny tonia mpampanoa
Efa nisy hetsika nataon’ny mpitsabo…
Notsindriny anefa fa afaka mitondra izany amin’ny fitsarana raha manana porofo ny Fianakavian’ny Dr Daniel.
Efa niteraka hetsika tsy fanekena ny fampiakarana fitsarana io profesora io ireo mpiasan’ny fahasalamana any an-toerana. Tahaka izany koa ireo mpitsabo etsy amin’ny HJRA. Andrasana ny mety ho tohiny.